Ingabe imboni noma inkampani ukuhweba? Futhi ukungitshela inkonzo yakho?
Singabantu embonini eye ezikhethekile aluminium ukucutshungulwa yokukhiqiza iminyaka engaphezu kwengu-10, njenge zezimboni impahla angajwayelekile, aluminium nginyathela izingxenye, aluminium namachibi, ukushisa zika, aluminium isikulufa njll
Yini izinzuzo zakho futhi inqubo oda? Ingabe ikhona MOQ eyayidingeka?
Sinikeza inkonzo OEM for aluminium ukucutshungulwa nge intengo ifektri e nqampuna umhlabeleli. Inqubo oda obathuma umdwebo kithi, thina ngeke ukuhlaziywa umdwebo wakho bese quote ngokusekelwe MOQ owufunayo. (Ayikho MOQ iyadingeka, kepha intengo ye ingxenye encane kungaba ephakeme kunaleyo ubuningi omkhulu)
Injani yesiqinisekiso control imikhiqizo izinga?
Thina ubamba qinisa izinga ukulawula kusuka kakhulu ekuqaleni kuze kube sekupheleni futhi sihlose at 100% iphutha khulula. Ungadinga i-emva-ukudayiswa kwamakhasimende uma kukhona noma iyiphi inkinga. Njalo oda kufanele kudlule mnyango lethu QC phambi lokuthumela.
Ingabe ukunikeza amasampuli? Ingabe khulula noma eyengeziwe?
Yebo, asikwazanga ukunikeza isampula icala khulula kodwa musa akhokhe izindleko yezokuthutha kanti injongo ukuthumela amasampula kuwe sokuhlola imikhiqizo yethu izinga nokucubungula ubuchwepheshe.
Kanjani kungaba inqubo uma ngidinga ukwenza sibonelo?
Uma une imidwebo noma amasampula, sicela ukhululeke ukusithumelela, bese usitshele nezidingo zakho ezikhethekile ezifana impahla, ukubekezelelana, ebusweni ukwelashwa kanye nenani okudingayo.
Wenzenjani ngomkhumbi imikhiqizo? Yinde kangakanani leyo ukulethwa isikhathi sakho?
Njengoba ngokuqondene isampula, ngokuvamile kuba 5 ~ 10 izinsuku, kodwa ngokuvumelana nobungako kanye nemikhiqizo complicated.We kungaba ngomkhumbi nabo nge DHL, EMS njll Ngokuqondene-oda enkulu kakhulu ukukhiqiza imikhiqizo, thina izohamba kubo ngu Fob , isikhathi kwezidingo kusekelwe izwe ongathanda ngomkhumbi, kodwa izinsuku eseduze imayelana 25 days.
is ifektri yakho Umiswe kuphi? Kanjani i usivakashele?
Inkampani yethu itholakala Jiji Industrial zone, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, ngumzi esiseduzane kusukela Shenzhen, Guangzhou, Hongkong.